Ihe mkpuchi maka AirPods na weebụsaịtị Apple | Akụkọ akụrụngwa
Na-ekpuchi maka AirPods na weebụsaịtị Apple
Ngwa bụ doro anya na ahịa dị mkpa na Apple ụwa na iji gosipụta ọnụ ọgụgụ buru ibu anyị na-ahụ na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ Cupertino. Ọ bụ eziokwu na ọnụahịa nke mkpuchi, eriri na ngwa ngwa niile a kachasị ọnụ, mana na nke a, mkpuchi ahụ etinyela ire maka AirPods Pro Ha siri ezigbo ike na-echebara ụdị aha ahụ echiche nakwa na e mepụtara ha kpọmkwem maka ekweisi Apple ndị a.
Modelsdị abụọ nwere ụdị dị iche iche mana otu nzube ahụ
Ebumnuche nke mkpuchi ndị a bụ iji kpuchie mkpa dị iche iche nke ndị ọrụ yana n'ọnọdụ niile iji kpuchido igbe na-akwụ ụgwọ yana ekweisi onwe ha site na bumps, ọkọ na ọbụlagodi na otu n'ime ha bụ Waterproof. Ee ihe Mpempe akwụkwọ pụrụ iche nke Catalyst Ọ bụ otu n'ime mkpuchi Apple na-ere na weebụsaịtị ya site ugbu a gaa n'ihu Ọ nwere ọnụahịa nke euro 29,95, ọ bụ ikpe silicone na asambodo IP67. Ngwunye na-eguzogide ọgwụ dị nro nke na-agụnyekwa carabiner maka itinye na loops trouser ma ọ bụ akpa.
N'aka nke ọzọ anyị nwere ụdị ahụ Ọ bụrụ na Woolenex, ihe mkpuchi dịtụ iche na nke gara aga nke na-enye anyị ngwakọta ngwakọta agwakọta na nnukwu nguzogide abrasion, nicks na ọkọ. N'ime ikpe a, anyị na-ahụ shei Bayer Makrolon polycarbonate nke nwere ọgwụ e kpụrụ dị obere na nnukwu nguzogide. Na nke a, ọnụahịa ahụ dịkwa 29,95 euro.
O doro anya na anyị nwere ike ịchọta mkpuchi n'akụkụ ndị ọzọ na ikekwe ọbụlagodi na ọnụahịa ka mma, nsogbu ahụ bụ otu ihe ahụ mgbe ọ bụla anyị lekwasịrị anya na mkpuchi nke mkpuchi ahụ. N'ezie nke a nwere ike ịbụ nhọrọ nhọrọ dị oke mma maka ezumike ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Na-ekpuchi maka AirPods na weebụsaịtị Apple
Otu esi agbanwe ROM ma debanye akwụkwọ ikike nke OnePlus zụtara na China
Kygo E7 / 1000 Kygo's TWS maka ụdị ndị ọrụ niile [Nyochaa]